कुरुम्वाङले सिनियरलाई पन्छाउँदै कसरी पाए दाङको सीडीओ ? – Sidha Patra
कुरुम्वाङले सिनियरलाई पन्छाउँदै कसरी पाए दाङको सीडीओ ?
काठमाडौं । सिनियर सहसचिवहरुलाई गृह मन्त्रालयमै थन्काएर उपसचिव रामबहादुर कुरुम्वाङलाई दाङ जिल्लाको सीडीओ बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खगराज अधिकारी गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुअघि दुई जिल्लाको सीडीओ हेरफेर गर्दा कुरुम्वाङले दाङ जिल्ला हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनी आइतबार दाङमा हाजिर हुँदैछन् ।
यही असार १८ गते अवकाश हुन लागेका दाङका प्रजिअ दीर्घनारायण पौडेललाई उनकै रोजाइमा गृह मन्त्रालयमा तानेर कुरुम्वाङलाई दाङ पठाइएको हो । यसैगरी सप्तरीका प्रजीअ फणिन्द्रमणि पोखरेललाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा तानेर गृहमन्त्रालयमा रहेका सिनियर सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई सप्तरी पठाइएको छ । गृहमन्त्रीले जाँदाजाँदै गरेको यो सरुवाबाट मन्त्रालयका अधिकारीहरु सन्तुष्ट छैनन् । ‘कमल ढकाल, रामप्रसाद पाण्डे, कृष्णप्रसाद पन्त, जनार्दन गौतमलगायत सिनियर सहसचिव मन्त्रालयको बरण्डामा हल्लिएर बस्नुपरेको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर उहाँहरुभन्दा जुनियरलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’
कुरुम्वाङले भने आफूसँग उपसचिव बनेको १२ वर्षको अवधिमा ९ जिल्लाको सीडीओ बनेको अनुभव भएको र मिलेर काम गर्ने शैली भएकाले सबैले मन पराउने गरेको बताउँछन् । ‘मलाई सबै पार्टीकाले मन पराउँछन्,’ कुरुम्वाङ भन्छन्, ‘म बाँकेमा बस्दा नेकपाको सरकार भयो तर नेपाली काँग्रेसका मानिसहरु पनि मसँग असाध्यै नजिक छन् । बर्दिया, स्याङ्जा र अछाममा पनि त्यस्तै भयो ।’
कुरुम्वाङ एक वर्षको बीचमा तीन ठाउँमा सरुवा भएका छन् । बर्दियामा २० महीना सीडीओ बनेर बसेका उनलाई कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरको बेला हटस्पट मानिने बाँकेको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो । बाँकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले प्रशासनिक कौशल देखाउन नसकेको भन्दै उनलाई गृहमा तानेर कुरुम्वाङलाई बर्दियाबाट बाँके सरुवा गरिएको थियो । सीडीओहरुको नजरमा बाँके आकर्षक जिल्ला हो ।
त्यस्तै बाँकेमा ११ महिना बिताएर कुरुम्वाङ कैलालीको टीकापुर इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । टीकापुरमा बसेको दुई महिनामै उनलाई सुर्खेतस्थित अख्तियारको कार्यालयमा सरुवा गरियो । तर सुर्खेतमा हाजिर हुन नपाउँदै उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानियो र गृहबाट दाङ पठाइयो । ‘कोभिडको कारणले म सुर्खेत जानै पाइनँ । अख्तियारले फेरि गृहमै पठाइदियो,’ उनले कारण खुलाए । आगामी आइतबार दाङ हाजिर हुने उनको तयारी छ । साभार अनलाइन खबर